Makiazy palitao eyeshadow 15 miloko, makiazy avo lenta, tantera-drano ary maharitra maharitra Matte Nudes Shimmer Maso voajanahary alokaloka mora afangaro.
Voalohany:Fampiasana maharitra: Amin'ny fampiasana an'ity entana ity dia hitohy mandritra ny andro. Miaraka loko miloko marevaka sy maharitra be, tazomy mandritra ny fotoana maharitra ny makiazy mety tsara.
Kapila kosmetika maro fampiasa - Ny kapila aloky ny mason-koditra JOYO dia manana karazana fiovan'ny aloky ny maso miisa 15, ao anatin'izany ny perla miloko 5 sy matte voajanahary 10. Sahy, tsy miandany, miavaka na mifangaro.
Roa voalohany:15vovoka miloko,Amin'ny fampiasana alokaloka mahazatra indrindra, miantoka ny lalao lokon'ny hoditra tsara indrindra sy ny famaranana voajanahary. Izy io dia amin'ny kalitao tena tsara sy marobe ary mora ampiasaina amin'ny fomba mora kokoa hametrahana azy, mora apetaka amin'ny borosy miafina, tena mifangaro mba hamoronana alokaloka ilainao.
Loko mateza, loko miloko sy mateza, mitazona makiazy aloky ny maso tonga lafatra. Mpanakanto matihanina makiazy manolotra soso-kevitra amin'ny fametrahana loko hoditra izay manakaiky ny hoditra indrindra, manomboka amin'ny tsipika volomaso mankamin'ny taolana, mba hahazoana antoka ny fampidirana tsy misy fangarona ny aloky ny maso rehetra. Pink sy mena ary maro hafa.
Telo voalohany:Sakafo fisakafoanana pigmentaire tsirairay eyeshades mora azo apetraka mifanaraka amin'ny volon-koditra rehetra, mihombo tsara, mifikitra mafy. Akanjo maharitra 8 ora izay tsy manjavona, porofon-drano, tazomy mandritra ny fotoana maharitra ny makiazy aloky ny masonao tonga lafatra.
Efatra voalohany:Palety avana matihanina, ity takelaka aloky ny maso ity dia misy loko mamirapiratra 18 manomboka amin'ny volomparasy ka hatramin'ny mavokely mamirapiratra, miaraka amin'izay ilaina rehetra hamindrana ny hodi-maso. Ity kapila aloky ny maso feno loko ity dia hanampy anao hamorona endrika manintona indrindra.
Tsy tantera-drano maharitra: loko maharitra, aloky ny maso mamirapiratra, akanjo mety ary fanadiovana mora foana. Ny takelaka Eyeshadow antsika dia tena mora ampiasaina (raha ny tena izy dia tsara kokoa ny mampiasa rantsantanana fa tsy borosy).
Safidy isan-karazany hisafidianana: tena mora ny manosotra, tsotra mifangaro, manome anao fahaizana sy tsy manam-paharoa tsy manam-paharoa. Milamina ny paozin'ny vovoka matihanina, mamorona fijery mahasarika ny masonao na isan'andro. Ity aloky ny maso aloky ny maso ity dia azo ampiharina amin'ny tarehy.
Mamorona makiazy tsy misy fetra, mety amin'ny fotoana samihafa, toy ny maquillage isan'andro, maquillage, vahaolana maquillage play role, ary hatramin'ny make-up amin'ny Holiday. Fanomezana tonga lafatra ho an'ny zazavavy, vehivavy, vehivavy, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, Krismasy, fetin'ny reny, andron'ny mpifankatia sns
Teo aloha: Solomaso maso-BD15-COOL
Manaraka: Fanamboarana tarehy-BD-Blush
JOYO © Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Lipotra Mini, Borosy tsara indrindra, Lokomena savony, Eyeshadow tsara indrindra amin'ny crème, Solomaso maso volamena, Matte Eyeshadow Palette, Vokatra rehetra